KANDIDAN’NY TIM : Tsy mpiraharaha ny maharary an’Antananarivo hatramin’izay
Mamy ny seza sy ny voninahitra. Izao vao midodododo etsy sy eroa mba te hatao hoe te-hahalala fatratra izay maharary ny mponina eto an-drenivohitra ny kandidàn’ny Tim eto Antananarivo, Rina Randriamasinoro. Hatramin’izay nitazam-potsiny sy nanao bemarenina manoloana ny antsoantson’ny mponina ny tenany. 7 octobre 2019
Tsy takona afenina intsony ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana hataon’ny kandidà Rina Randriamasinoro, izay natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara eto amin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Tato anatin’ny telo herinandro nifanesy izay dia tsy mitsahatra mampiseho ny tenany manerana ny Fokontany maro eto an-drenivohitra izy.
Iaraha-mahita ihany koa ny fisoloany sahady ny andraikitra tokony mbola hosahanin’ny ben’ny tanàna am-perin’asa vokatr’izay finiavana te hiseho vahoaka mafy izay. Ny kandidà Rina Randriamasinoro anefa dia fantatra tamin’ny andraikiny teo aloha fa efa sekretera jeneraly teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ary efa mpitam-bola ny tanàna ihany koa. Tao anatin’ny fotoana nitantanan-dRamatoa Lalao Ravalomanana ny Kaominina dia nikorosofahana tanteraka ny tanàna.
Maro ireo mimenomenona vokatr’izany satria ny fako tsy voafehin’ny Kaominina intsony ny fandraofana azy. Ny tanàna maloto zara raha misy mpanadio, ny fitohanana lavareny isan’andro noho ny fisian’ireo kilavadavaka isaky ny iray metatra izay tsy mba nisy fanamboarana. Manginy fotsiny ny olan’ny fiakaran’ny rano vokatry ny fahatsentseman’ireo tatatra satria tsizarizary tanteraka ny fanadiovana. Tao anatin’izay anefa, heverina fa mpiara-miasa akaiky amin-dRamatoa ben’ny tanàna ny kandidà Rina Randriamasinoro. Heverina ihany koa fa azony atao tsara ny mandroso hevitra amin’ny fanadiovana ny tanàna. Niraha-nahita anefa fa tsy nisy fivoarana ny fitantanana ny tanàna, izany hoe nijanona ho mpitazan-davitra fotsiny ihany ingahy sekretera jeneraly na tokony mba nanao izay azony natao ihany aza tamin’izay fotoana. Ny mahagaga ankehitriny, isan’ireo Kandidà hifaninana ho ben’ny tanànan’Antananarivo ny tenany ka izao vao mikofoka mafy.
Fa taiza hatramin’izay ?
Re fa taorian’ilay ora-mikija teto an-drenivohitra, ny herinandro lasa teo iny dia nanao fidinana ifotony faran’izay haingana teny amin’ireo faritra mora dibo-drano ny tenany. Anisan’izany ny tetsy Besarety. Voalaza fa nisy ny tafa mivantana sy fanomezan-toky nataony tamin’ireo mponina ho fandraisan’ andraikitra amin’ny fanarenana ireo lakan-drano teny an-toerana. Hatramin’izay, niara-nitakosona lalandava tamin’ny ben’ny tanàna izy tsy mba nisy na indray maraina aza fotoana nandehanany teny Besarety. Satria i Besarety dia tsy vao tamin’ny herinandro ihany akory no lasibatry ny fiakaran’ny rano. Mapametra-panontaniana hoe, taiza foana izy hatramin’izay no miandry fifidianana no manatsara tena etsy sy eroa ? Midika ihany koa ve izany fa tsy nampoiziny ny naha kandidà ho ben’ny tanàna azy taty aoriana ? Satria raha nampoiziny dia azo eritreretina fa tsy amin’izao fotoana an-katoky ny fampielezan-kevitra izao vao miezaka mampiseho tena izy. Ankoatra izay, fantatra ihany koa nitsika ny faritra teny Analamahitsy ny kandidà Rina Randriamasinoro. Nizara fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra izy tamin’izany . Tsy misy velively ny maharatsy izany saingy ny fanontaniana mby ao an-tsain’ny mpanara-baovao hatrany ny hoe, taiza izany no tsy natao hatramin’izay ?
Mazava ao anatin’ny fihetsiky ny kandidà an’ny Tim ity fa mamy ho azy ny hahazo ny toerana, ka hataony izay fomba rehetra hambaboana ny fon’ny olom-pirenena. Raha tena finiavana marina mantsy no ao aminy dia hatramin’izay no efa nanatanteraka izany izy. Nandritra ity fidinana ifotony teny amin’ny Boriborintany fahatelo sy fahadimy nataon’ny kandidà Rina Randriamasinoro ity ary dia nambarany, fa afaka mifandray sy mifampitakosina amin’ny sarangan’olona rehetra ny tenany. Niaraha-nahita anefa ny vokatry ny fitantanan’ny ben’ny tanàna teo aloha, izay tsy vokany mazava loatra ka azo heverina mihitsy ny hahomby ny fitantanan’ny olona izay efa niara-niasa akaiky taminy ihany.